Happy Birthday လူပျိုကြီး, Torres — MYSTERY ZILLION
Happy Birthday လူပျိုကြီး, Torres
ဟပ်ပီး ဘတ်ဒေးပါ လူပျိုကြီးရေ...နောက်ကျသွားတယ်နော်..:D
ဟပ်ပီး ဘတ်ဒေးပါ Torres ရေ...နောက်ကျသွားတယ်နော်..:D
1 member is celebrating their birthday on 22-09-2009:
-လူပျိုကြီး (Age: 25)
- Torres (Age: 22)
bot က တင်တာနဲ့ Thread နှစ်ခု ထပ်နေဦးမယ် မော်မော်ပရစ်ကြီး
ကျနော်ကတော့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ကြိုလုုပ်ထားတယ် :P
Facebook မှာတော့ တစ်ခါ ဆုတောင်းပေးပြီးပြီ.......
ဒီတစ်ခါ နောက်တစ်ခေါက် ဆုတောင်းပေးမယ်.....
ပါ ကိုလူပျို......... တိတ်တိတ်လေးတောင်းထားတဲ့ဆုတွေရှိရင် မြန်မြန်ပြည့်ပါစေဗျာ............
HAPPY BIRTHDAY FOR MR KO လူပျိုကြီး and Mr Ko Torres... !:D:)
Happy Birthday ကိုလူပျိုကြီး နှင့် ကို Torres
2 members are celebrating their birthday on 22-09-2009:
-လူပျိုကြီး (Age: hidden or unknown)
-Torres (born in 1987, Age: 22)
လုံး၀ မဖြစ်သင့်ဘူး .. ဟင် ့.. ဒီကဖြင် ့ဆုတောင်းပေးမလို ့..ဟာကို. :d
အသက်တွေ လဲ ကြီးဘီဗျာ..ဘာ ဘဲ ပြောပြော..လိုအပ်ချက်တွေ ကို မညီးမညူကူညီပေးတဲ ့
ကိုလူပျိုကြီး .. မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ် နဲ ့ညားပြီး သာသနာ့အကျိုး သယ်ပိုးမဲ ့သားကောင်း
သမီးကောင်းတွေ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါစေဗျာ.. :d
Happy birthday ပါ ကို လူပျိုကြီး...
ဒီနှစ်၀ါကျွတ်ရင် .. တပြိုင်တည်း လူပျိုကြီးဘ၀ကနေကျွတ်နိုင်ပါစေ:D:D
Happy birthday ကိုလူပျိုကြီး...
စင်ကာပူ မင်ဘာများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ လူပျိုကြီးက မွေးနေ့အမှတ်တရ မုန့်ကျွေးမယ်တဲ့ ခင်ဗျ .. :d
မွေးနေ့ရှင် ၂ ဦးစလုံး ကျမ်းမာ ချမ်းသာကြပါစေဗျား။
မွေးနေ ့ရှင်နှစ်ဦးမွေးနေ ့မှာပျော်ရွင်ပါစေဗျား :6::6::6:
Happy BD Bro ...
May God Bless U always .... :6:
သြော်....အခုမှမွေးနေ့ရောက်တာလား ၊ ငယ်သေးတာပဲ ၊။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ။:)
Happy Birthday နော.် ကိုလူပျိူကြီး နဲ့.. Torres.
ကိုလူပျိုကြီး စနေနေ့ကျရင် ပေါင်းကျွေးရမယ်။ :36::36::36:
ကိုလူပျိုကြီး မွေးနေ ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်...
စကားမစပ် (မိန်းမလဲ မြန်မြန်ရပါစေဗျား.... :d)
မွေးနေ့ကို လူမသိအောင်နေတာ ကြာပေါ့ ဟိဟိ အသက်ကြီးသွားတာ လူသိမှာစိုးလို့လေ။ ဆုတောင်းပေးကြသူများ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။ မွေးနေ့တူတဲ့ ကို Torres လည်း ကျွန်တော့်လို လူပျိုကြီး မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ မွေးနေ့မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
နာက သူ့ဘလော့မှာ ကြိုလုပ်ပြီးသား
နှစယောက်စလုံး ဟက်ပီး ဘာ့(သ်)ဒေးနော်...
ကိုလူပျိုရေ.. ထပ်လောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.. အစ်ကို့အဆက်ဟောင်းကြီးရဲ့တူမတွေရဲ့ မေးလ်လိပ်စာတွေဘာတွေပေးနော်.. နော်လို့.. ကတိတည်နော်.. :d
ကိုလူပျိုလည်း စစ်လို့မရရင် မစစ်တစစ်နဲ့ ညားပါစေလို့.. ဟီး.. ချစ်လို့စတာနော်.. :d
ကိုလူပျိုကြီး မွေးနေ့မှာ နာမည်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ :d
Happy Birthday ပါဂျာ...။
ပေးဖို ့လက်ဆောင်ကလည်း..အလောသုံးဆယ်ဖုတ်လို်က်ရလို ့..အဟိး
ဆုတော ့မတောင်းပေးတော ့ဖူးနော်..အဟီး..တော်ကြာ ကိုယ်ဘက်လှည် ့လာမှာဆူုိးလို ့..အဟဲ ။:D:D:D
ဟာမေ ့နေလို ့နောက်တစ်ယောက်ရှိတေးတယ်မလား..တွဲစားလိုက်နော်..အဟီး။ ရန်မဖြစ်နဲ ့..အဟီး :P
ကိုလူပျိုကြီး ရဲ့ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ။
တွေ့ရအောင် အခု စနေ လာခဲ့လေ .. လူပျိုကြီး မုန့်ကျွေးမယ်တဲ့ :d:d
မနေ့ကတော့ ကိုသာသာ့ကို ကျွေးတယ်ပြောတာပဲ.. နောင်နှစ်မှပဲ နှစ်နှစ်စာ လာစားတော့မယ်.. :d
တစ်ခုပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်.. မိန်းမရပါစေဗျား
ပြဿနာရှာနေပြီ အကြီးအကျယ်ကို ပြဿနာရှာနေပြီ :d အရင်တစ်ခါလို ဘိုင်ပြတ်လို့ကတော့ ကဒီဘီ့တာဝန်။ အလုံး ၇ လုံးကလည်း မတွေ့တာကြာဆို သူလည်း အွန်လိုင်းလာဖြင့် မလာပဲနဲ့များ။
မနေ့ကတော့ ကိုသာသာ့ကို ကျွေးတယ်ပြောတာပဲ.. နောင်နှစ်မှပဲ နှစ်နှစ်စာ လာစားတော့မယ်.. :d တစ်ခုပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်.. မိန်းမရပါစေဗျား
နှစ်နှစ်စာ သွားကြားထိုးတံ နှစ်ချောင်းဆိုလုံလောက်မယ်ထင်တယ် :d
happybirthday ဆိုတော့ ကိတ်မုန့်ကျွေးမှာပေါ့နော် ။
အလကားရရင် ဟီး ဘာမှပြော၀ူးနော်
အကျွေးအမွေးက မပါရင် ပြောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး ဖိုရမ်တစ်ခုလုံးစာ ကျွေးလိုက်မယ့် လာလေ့ရော မလောက်ရင်ပြောနော် Facebook ရော MZ ပါဆင်တူ ကိတ်မုန့် WikiMedia ကနေဝယ်ကျွေးထားတယ်။:D